तैमुर जस्तो स्वस्थ बच्चा जन्माउन सबै किसिमका सागसब्जी खाए“ ः करिना - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Headline2 International Main News National तैमुर जस्तो स्वस्थ बच्चा जन्माउन सबै किसिमका सागसब्जी खाए“ ः करिना
तैमुर जस्तो स्वस्थ बच्चा जन्माउन सबै किसिमका सागसब्जी खाए“ ः करिना
Marganugamidaily प्रकाशित समय 1:18:00 AM
एजेन्सी । बलिउड स्टार किडमा अहिले सर्वा्धिक चर्चा कसको हुन्छ ? निसन्देह तैमुरको । त्यसो त तैमुरको चर्चा हुनुमा पनि कारण छ । उनी बलिउडकी जिरो फिगर अभिनेत्री करिना कपूर र अभिनेता सैफ अलि खानका छोरा जो परे । कपूर खानदानका नाती तथा भान्जा ।
तैमुर अली खान आफ्नो सुन्दरतालाई लिएर सोशल मिडियामा निकै चर्चामा छन् । तैमुर खान उमेरले जम्मा दुई वर्षका भए । तर, उनको गोरो र·, हल्का खैरो कपाल तथा निलो आँखा तथा गोलो मोटो गाला देखेर जो सुकै व्यक्ति पनि आर्क्षित हुने गर्छ ।
उनलाई सुन्दर बनाउनुमा आमा करिना कपूरको निकै ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ । आखिर, करिना कपूरले गर्भावस्थामा त्यस्तो के खाएकी थिइन् , जसले तैमुरलाई यति धेरै गुड लुकिङ र ह्याण्डम बनायो ? यसको खुलासा करिना कपूरले हालैमा मात्र भारतको चर्चित पत्रिका नवभारत टाइम्स सित गरेकी छिन् ।
प्रशस्त मात्रामा घिउ खाएँ भारतीय अभिनेत्री करिना कपूरका अनुसार उनी घिउ भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन् । उनले गर्भावस्थामा पनि घिउको सेवन पर्याप्त मात्रामा गरिन् । गर्भा वस्थामा उनले आफूलाई मनपर्ने खानपानमा पनि कुनै किसिमको बन्देज लगाइन्न । बरु उनले खानपानमा विशेष ध्यान दिइन् र जुनसुकै खानेकुरा खाएपनि सही समयमा उचित परिणाममा मात्र सेवन गर्थिन् ।
सबै किसिमको सागसब्जी खाएँ करेला, लौका लगायतका तरकारी धेरैको रोजाईमा पर्दैन । तर करिना कपुरले भने ती सबै तरकारीको सेवन गरिन, जो सामान्य अवस्थामा मानिसहरु लाई खासै मन पर्दैन । बरु उनी छोरा तैमुरले पनि यी सबै खानेकुरा खाओस् भन्नेमा समेत सधैभरी सचेत छिन् । उनी चाहन्छिन, छोार तैमूले पनि यी सबै खानेकुराको स्वाद लिने बानीको विकास गरोस् ।
नास्ता छोडिनन गर्भावस्थामा स्वस्थ तथा आहार जरुरी छ । यो कुरालाई करिनाले जहिलेजनि गम्भीरतापूवर्क लिइन् । उनले गर्भावस्थामा खानपानलाई कुनै प्रकारको हेलचक्राई गरिनन् । उनी जहिले पनि विहानको नास्ता गरेर मात्रा अन्य काम गर्थिन् । उनी भन्छिनन, मलाई विहान उठ्ने वित्ति कै खाना खानु परथ्र्यो । अन्यथा मेरो दिमागले काम गर्नै छोड्थ्यो । त्यसैले म विहान वर्कआउट गर्नु पहिले नै अण्डा र टोष्ट वा ज्वानो हालेको परौठा नास्तामा लिन रुचाउँथे ।
विहान सबेरै उठ्थे करिना भन्छिन, गर्भावस्थाका क्रममा उनको अनुहारमा जुन किसिमको चमक थियो, त्यसको मुख्य कारण भनेकै विहान सबेरै उठ्नु थियो । गर्भावस्थामा करिना राती साढे दश बजे सुत्थिने भने विहान साढे सात बजे नै उठ्थिन् ।
सधै सक्रिय रहिन करिनाका अनुसार कुनै काम नगरेर आराम गर्नु मात्र पनि गर्भावस्था हैन । त्यसैले, उनी प्रत्येक गर्भवती महिलाहरुलाई यही सल्लाह दिन चाहन्छिन् की गर्भवस्थामा निस्क्रिय हैन, सक्रिय जीवन विताऔ । यो कुरालाई उनले दैनिक जीवनमा लागु पनि गरिन् । गर्भावस्थामा उनले फिल्मको सुटि· पनि गरिन् । विभिन्न विज्ञापनमा पनि काम गरिन् । त्यतिमात्र हैन, तैमुर जन्मेको दुई महिना नपुग्दै उनले वर्कआउट पनि सुरु गरिन् ।
चिकित्सकको सल्लाह लिए करिना भन्छिन, उनले गर्भावस्था लाई एउटा जर्नीको रुपमा बुझिन् र यसको लागि बाटो आफै बनाइन् । अरुको सल्लाह लिइन् तर त्यही गरिन् जो आफूलाई ठिक लाग्यो । यसबाहेक, ससाना कुरामा पनि चिकित्सकको सल्लाह लिइन् । जसले गर्दा नौ महिनामा हुने प्रत्येक वदलावलाई उनले नजिकबाट महसुस गर्ने अवसर प्राप्त गरिन् ।
#Breaking #Headline1 #Headline2 #International #Main News #National